अभिनेत्री राखी सावन्त र शिल्पा शेट्टीकी बहिनी बिचको मामला के हो ? ‘बिग बोस’ बाटै धरधरि आँशु झार्दै बाहिर निस्किन समिता – OSNepal
अभिनेत्री राखी सावन्त र शिल्पा शेट्टीकी बहिनी बिचको मामला के हो ? ‘बिग बोस’ बाटै धरधरि आँशु झार्दै बाहिर निस्किन समिता
बिग बोसको घरमा शमिताले बनाएको भाइ राजीव आडतियाले बिग बोसको घरमा रहदा धेरै सम्झना बनाए तर केही हप्तामै उनी घरबाट आउट भए । त्यसयता उनले बिग बोसका धेरै सम्झनाहरु सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेका छन् । यसैबीच, उनले आफ्नी बहिनी शमिता शेट्टीको पीडा वर्णन गर्दै एक इन्स्टा स्टोरी राखेका समेत छन्।
जसमा उनले शमितालाई कत्तिको पीडामा छ भन्ने थाहा भएको बताएका छन् । अब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले पनि आफ्नो इन्स्टाग्राम ग्राममा राजीवको कथा रिपोस्ट गरेर बहिनीलाई समर्थन गरेकी छिन् । वीकेन्ड का वारमा शमिताको नक्कल गर्दै राखी सावन्तले उनको मजाक गरे पछि यो पोस्टहरु बाहिर आएको हो ।
वीकेण्डको बारमा जब सलमान खानले शमितालाई हातमा कुनै समस्या छ कि छैन भनेर दर्शकले जान्न चाहेको सोधेका थिए । तर उनले बताउन अघि राखी सावन्तले उनको मजाक गर्छिन् त्यसपछि शमिता रुँदै कोठाबाट निस्किन्छिन् । तर उनका भाइ राजीव र शिल्पा शेट्टीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पीडा व्यक्त गरेका छन् ।
शमिताको कहानी सेयर गर्दै राजीवले लेखेका छन्–यतिखेर शमिता निकै पीडामा छिन् भन्न चाहन्छु । म शमिताको हात र खुट्टामा मालिस गर्थें ताकि उनलाई राम्रो होस् र राम्रो निद्रा लागोस्। शमिताको काँधमा दुखाइ छ, जसको उपचार उनले गर्थिन्, तर उनले अहिलेसम्म हार मानिनन् , उनी साँच्चै बलियो केटी हुन् । शमिता बिना कुनै गुनासो घरमा काम गर्ने गरेको समेत शिल्पाले बताएकी छिन् ।